The 20 best education services 2019 ― DoneMaster မွနျမာ
Find the best education service
စင်ကာပူနိုင်ငံအခြေစိုက် Auston Institute သည် ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပြီး ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းပညာရေးနယ်ပယ်တွင် engineering ၊ IT နှင့် Management ဘာသာရပ်များကို နှစ် ၂၀ကျော် အောင်အောင်မြင်မြင်သင်ကြားပေးလျက်ရှိသည်။ Singapore ၊ Sri Lanka Campus များမှလုပ်ငန်းနယ်ပယ်အသီးသီး တွင်အောင်မြင်နေသောကျောင်းသား ကျောင်းသူပေါင်း ၆၀၀၀ ကျော်မွေးထုတ်ပေး ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ဤသို့အောင်မြင်မှု သရဖူဆောင်း နိုင်ခဲ့သော Auston Institute ၏ ကမ္ဘာ့အသိအမှတ်ပြု ဒီပလိုမာများ၊ ဘွဲ့ဒီဂရီများ ကို ယခုအခါရန်ကုန်မြို့ တွင် တက်ရောက်နိုင်တော့မည်ဖြစ်သည်။ Auston Institute ၏မျှော်မှန်းချက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံရှိ
အင်္ဂလန် နိုင်ငံ တွင် တစ်နှစ်ဝင်ငွေ သိန်း၁၀၀၀ နီးပါးရရှိနိုင်သော Life Changing “University of Sunderland” ရဲ့ Bsc (Hons) in Computer Science ဘာသာရပ်။ (University of Sunderland ၏ ဖော်ပြချက်အရ)
Computer Science ဘာသာရပ် ကိုဘယ်လို တက်ရောက် နိုင်မလဲ ?
📚 IGCSE, GCE ‘O’ LEVEL, တက္ကသိုလ် ဝန်ထမ်းအောင်မြင်ထားတဲ့ ကျောင်းသားကျောင်းသူ များ အနေနဲ့ British University College တွင် ကုန်ကျစရိတ် သက်သာစွာဖြင့် (၆) လ တက်ရောက်ပြီး အင်္ဂလန်တွင် Foundation ပြန်တက်စရာမလိုဘဲ တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
📚 ၁၂ တန်းအောင်ကျောင်းသား/သူ များက ရန်ကုန်တွင် Foundation ၆ လ တက်စရာ မလိုဘဲ အင်္ဂလန် နိုင်ငံ တွင်
Canadian International College - Myanmar
“ကနေဒါနိုင်ငံရဲ့ ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်တက်မည့်သူများအတွက် One to One Advising Day – Week (1)”
One to One Advising Day – Program ဟာ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်များတွင် တက်ရောက်သင်ယူလိုသူလူငယ်များအတွက် သိလိုသမျှမေးမြန်းမှုများ အကြံပေး ဆွေးနွေးမှုများ နဲ့အတူ လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီမယ့် ပြင်ဆင်မှုများအတွက် တစ်ဦးချင်းသီးသန့်ဆွေးနွေးပေးသွားမယ့်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ လာမည့် week (1) မှာကတော့ ကနေဒါနိုင်ငံရဲ့ ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်မှာတက်ရောက်မယ့်သူများအတွက် အခမဲ့ဆွေးနွေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်တက္ကသိုလ်တွေပါဝင်မှာလည်းဆိုတော့ ကနေဒါနိုင်ငံရဲ့ ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ် (၅)ခုဖြစ်တဲ့
(1) University of Toronto
(2) McGill University
16 Batch တန်းခွဲသစ် ဖေဖော်ဝါရီ (၁၉) ဖွင့်မည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုနိင်ငံတကာအဆင့်ဦးဆောင်နိင်ဖို့မြန်မာနိင်ငံတွင်အလုပ်ချိန်ပြင်ပတက်ရောက်နိင်သည့် Aldersgate College (Philippines) မှပေးအပ်သော MBA ဘွဲ့ကို တက်ရောက်
CMA Education Center
Computer သင်တန်းနှင့် အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းများ
Computer သင်တန်းနှင့် အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းများကို
📑27. 2. 2019(ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ပါမည်။
📚Summer English Course
🎓Oxford University မှ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများကို
အသုံးပြု၍ က​လေးများအလွယ်​တကူ နားလည်​နိုင်​​စေမည့်​
Teaching Methods များကိုအသုံးပြုသင်ကြားပေးမည်။
✅ English 4Skills သာမက ကျောင်းစာအတွက်ပါ
အထောက်အကူဖြစ်စေရန်အတွက် Basic Grammar,
Letter & Essay ရေးသားနည်းများကိုပါသင်ကြားပေးမည်။
Global College Myanmar
👉💯IGCSE အောင်မြင်ထားသူများနှင့် စီးပွားရေးပညာရပ်ကို တက်ရောက်လိုသူများအတွက် Global College ၏ တစ်နှစ် ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အနေဖြင့် Scholarship 100% အထိ ချီးမြှင့်မည့် အစီအစဉ်💯👈
🏆 Global College ၏ တစ်နှစ် ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အနေဖြင့် ဖေဖေါ်ဝါရီလမှာ Global College တွင် ဖွင့်လှစ်မည့် တန်းခွဲသစ်ကို တက်ရောက်မည့် ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ အတွက် ပညာသင်ဆုများ (၁၀၀%) အထိရရှိနိုင်မည့် အထူးအခွင့်အရေး ရှိကြောင်း သတင်းကောင်း ပါးအပ်ပါသည်။
🚩 Global College of Business & Technology သည် (၂၀၀၂) ခုနှစ်မှ စတင်၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အကောင်းဆုံး ပညာရေး ကုမ္ပဏီအဖြစ် (၁၇)နှစ် တိုင်တိုင် ရပ်တည်လျက်ရှိသည့် Regent Education
⏩ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့ IT ခေတ်ကြီးထဲမှာ
✅Software Engineer တစ်ယောက်အဖြစ်ရပ်တည်လိုသူများ၊
✅Network Engineer အဖြစ်ရပ်တည်လိုသူများ၊
✅ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် အမှတ်မမှီလို့ မတက်လိုက်ရသူများ
✅ကွန်ပျူတာနည်းပညာ ကိုစိတ်ဝင်စားသူများ အားလုံးအတွက်
⏩အင်္ဂလန်ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်ကြီးဖြစ်သော University of Gloucestershire မှ တိုက်ရိုက်ချီးမြှင့်သည့် BSc (Hons) Computing ဘွဲ့ကို GUSTO College မှာပင် (၃)နှစ် တက်ရောက် ပြီးရယူနိုင်ပါပြီ။
⏩ဘွဲ့ချီးမြှင့်ပေးမယ့် University of Gloucestershire တက္ကသိုလ်ကြီးဆိုတာ နှစ်ပေါင်း ၁၈၀ ကျော်သက်တမ်းရှိပြီး Top 10 Modern University စာရင်းဝင် တက္ကသိုလ်ကြီး ဖြစ်ပါတယ်။ UK အဆင့်သတ်မှတ်ချက် (၅၆)
နိုင်ငံတကာနှင့်ရင်ဘောင်တန်းပြီးITနည်းပညာနှင့်ပတ်သက်သောအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းကောင်းများရရှိနိုင်ရန်အကောင်းဆုံးသောဝန်ဆောင်မှု၊စိတ်အချရဆုံးသောအရည်အသွေးများနှင့်အပြည့်အဝသင်ကြားပေးနေသော.....အားလုံး အားလုံးအတွက် KMD
🔹Professional Office Staff တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တာလား...❓
🔹Web Developer သမားတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တာလား…❓
🔹Network Technician, IT Technician ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တာလား...❓
🔹Oversea သွားစရာမလိုဘဲ အလုပ်တစ်ဖက်နှင့်
🔺Kyoshin Language Academy Yangon တွင်ထိရောက်သောသင်ကြားရေးနည်းစနစ်များဖြင့် ဂျပန်စာကိုအခြေခံ(Basic) မှစ၍ (Vocabulary, Grammar,Reading, Listening, Kanji) စသဖြင့် ပြည့်စုံစွာသင်ကြားပေးလျက်ရှိပါသည်။
🔺သင်တန်းပြီးဆုံးသည်နှင့် ဂျပန်စာအရည်အချင်းစစ်သင်တန်း(JLPT)ကိုဖြေဆိုနိုင်အောင် သင်ကြားပေးပါသည်။
🔺ကျောင်းသားကျောင်းသူများထိရောက်သောပညာသင်ကြားမှုရနိုင်စေရန်အတွက် small class size ဖြင့်သာသင်ကြားပေးပါသည်။
🔺သင်တန်းပြီးဆုံးသည့်နေ့တွင်ကျောင်းသား ကျောင်းသူများနှင့် ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ သင်တန်းဆင်းပွဲရှိပါသည်။
💸Refer Friend,Get Discount
သူငယ်ချင်းတစ်ယာက်ကို မိတ်ဆက်ပေးမည်ဆိုပါက မိတ်ဆက်ပေးသည့်သူ အပါအ၀င်
ကွန်ပြူတာ နီပညာ သင်ကြားရေးနှင့် စက်ကရိယာများ ပြုပြင်ရေး သင်တန်းဖြစ်ပါတယ်. ကျွန်တော်တို့
သိတက်ကြွမ်းကျင်သော အတက်ပညာများကို သင်ကြာပေးချင်းနှင့် ဝေမျှချင်းကို မြတ်နိုးပါသည်
၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ ခြေလှမ်းစတင်ခဲ့တဲ့ Myanmar Imperial University ဟာ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ University of Northampton နှင့် Pearson တို့နှင့် ပူးပေါင်းကာ မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးအတွက် Bachelor programme ၊ Master programme ၊ Doctorate programme များဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးလျက်ရှိသလို မြန်မာလူငယ်များရဲ့ အိပ်မက်တွေ၊ အနာဂါတ်အောင်မြင်မှုတွေအတွက်လည်း ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲတွေ၊ ခေါင်းဆောင်မှုပညာရပ်နှင့် ပတ်သက်တဲ့ Leadership Forum တွေ၊ Research Development Seminar ပွဲတွေကို စဉ်ဆက်မပြတ် ကျင်းပပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။🇲🇲" မြန်မာနိုင်ငံသားများ၏ အောင်မြင်မှုများအတွက် Myanmar Imperial University "🇲🇲
Myanmar Institute of Business and Technology - MBT
Network Engineering Course ကို တန်းစဉ်သစ်များ ကို ကျောင်းအပ်စတင် လက်ခံပါပြီ
‼️ပထမဆုံး လာရောက်အပ်နှံသူ ၁၀ ဦး အတွက် ၁၀,၀၀၀ ကျပ် ခံစားနိုင်မည့် အခွင့်အရေး‼️
သင်တန်းသား သင်တန်းသူဦးရေ အပြည့်မြန်တာကြောင့် စိတ်ပါဝင်စားပြီး တက်ရောက်ချင်ပါက အလျင်အမြန် ကျောင်းသို့ လာရောက်စုံစမ်းနိုင်ပါပြီရှင်
📎Lab ခန်းများထားရှိပြီး စနစ်တကျ သင်ကြားပေးနေပါပြီ
Network ပိုင်းနဲ့ အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့သူတွေကော စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေကော တက်ရောက်သင့်ပါတယ်။
သင်ကြားပို့ချမယ့်ဆရာတွေကတော့ ICT နယ်ပယ်မှာ အတွေ့အကြုံ ရှိပြီးသား ဆရာတွေဖြစ်ပါတယ်ရှင့်
Myanmar Metropolitan College - Mandalay
နိုင်ငံတကာပညာရေး အစစ်အမှန်ကို Myanmar Metropolitan College မှ Mandalay သို့သယ်ဆောင်လာခဲ့ပါပြီ။”
🔹မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ကျောင်းသားလူငယ်တွေ ပြည်တွင်းမှာပဲ ပညာသင်ကြားရင်းနဲ့ နိုင်ငံတကာပညာရေးအစစ်အမှန်ကို ထိတွေ့ရယူနိုင်စေဖို့ရာ Myanmar Metropolitan College အနေနဲ့ အကောင်းမွန်ဆုံး သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွေ၊ အရည်အချင်းရော အတွေ့အကြုံပါပြည့်ဝတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမတွေ ဦးစီးပြီး အထိရောက်ဆုံး တတ်မြောက်အောင် သင်ကြားပြသနေတာဟာ ယခုဆိုရင် ၅ နှစ်တိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်
Myanmar Noble Collage
Myanmar Noble College ဟာဆိုရင်လည်း ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၁၅) ရက်နေ့ တွင်စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး Pearson Edexcel, UK မှအသိမှတ်ပြုခြင်းခံထားရသော ပုဂ္ဂလိကတက္ကသိုလ်များထဲမှ တစ်ခုအဖြစ်ရပ်တည်နေခဲ့ခြင်းမှာ ၈နှစ်တိုင်တိုင် ရှိခဲ့ပါပြီ . . .ထိုသို့ယနေ.တိုင်ရပ်တည်နေနိုင်ခဲ့ခြင်းမှာလည်း နိုင်ငံတကာ အဆင့်မှီသင်ရိုးညွှန်းတန်းများ အတိုင်းသင်ကြား ပေးနိုင်သည့် ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် စနစ်တကျ ဖွဲ.စည်းတည်ထောင်ထားပြီး Pearson ၏ HND သင်ရိုးများကို စနစ်တကျ သင်ကြားပို.ချခဲ့ခြင်းကြောင့်လည်း ဖြစ်ပါတယ် . . .
MNC မှာ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ပြီးသော ကျောင်းသား ကျောင်းသူများသာမက၊ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း မပြီးဆုံးသေးသောသူများ၊ GCE “O Level”,
Princeton Management College
🎓လူကြီးမင်းတို့ သား/သမီးများအတွက် UK အစိုးရတက္ကသိုလ်ကြီးမှ တိုက်ရိုက်ပေးအပ်သော B.A. (Hons.) Business ဘွဲ့ ကို ပညာသင်ဆုလျောက်ထားပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲ တက်ရောက်နိုင်မည့် အထူးအခွင့်အရေး ရှိနေပါပြီ။ 🎓
✅ UK အစိုးရတက္ကသိုလ်ကြီးမှ တိုက်ရိုက်ချီးမြင့်သော BA (Hons) Business ဘွဲ့ ဖြစ်သည်။
✅ ပထမနှစ်နှင့် ဒုတိယနှစ်ကို စင်္ကာပူအစိုးရ အသိအမှတ်ပြုကောလိပ်တွင် အချိန်ပြည့် လူကိုယ်တိုင်သွားတက်ရောက်လျှင် ရရှိမည့်အတိုင်း တထပ်တည်းတူညီမှုရှိမည်ဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးနှစ် (တတိယနှစ်) ကို UK အစိုးရတက္ကသိုလ်ကြီးတွင် အချိန်ပြည့် လူကိုယ်တိုင်သွားတက်ရောက်လျှင် ရရှိမည့်
River Samon Institute of Management
UK အသိအမှတ်ပြု MBA ဘွဲ့ကိုတက်ရောက်ပြီး Scholarship USD 2500 ရရှိမည့်အထူးအခွင့်အရေး🌟🌟
သင်တန်းကြေးသက်သာစွာဖြင့် တက်ရောက်နိုင်ပြီး UK MBA ကိုရရှိမည့်
👨‍🎓👩‍🎓University of the West of Scotland (UK) MBA
Batch-4 UK MBA သင်တန်းကို လာမည့် 2019 February လထဲတွင် ဖွင့်လှစ်သွားပါမည်။
- RSIM သည် ပြင်သစ်၊ အင်္ဂလန်၊ဆွတ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊မလေးရှားနိုင်ငံတို့နှင့် ပူးပေါင်းပြီး နှစ်စဉ် MBA ဘွဲ့ရပေါင်းများစွာမွေးထုတ်ပေးနေသော သင်တန်းကျောင်းဖြစ်ပါသည်။
100% Assignement ဖြစ်သဖြင့် အလုပ်တစ်ဖက်နှင့် တက်ရသည့်ကျောင်းသားများအတွက် အဆင်ပြေချောမွေ့စွာတက်ရောက်နိုင်မည့်ကျောင်းတစ်ကျောင်းလည်းဖြစ်ပါသည်။
Education Loan ယူစရာမလိုဘဲ
အောင်မြင်သော နိုင်ငံတစ်န်ိုင်ငံ၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၊ လုပ်ငန်းတစ်ခုတွင် အရည်အချင်း ပြည့်ဝ၍ စိတ်ဓါတ်ကောင်းမွန်သော ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ဦး ရှိနေစမြဲပါ။ ယခု Leadership သင်တန်းကတော့ မိမိ ရဲ့အဖွဲ့အစည်း၏ ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ကို ရောက်ရှိဖို့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအား တက်တက်ကြွကြွ ပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်လာစေရန် မည်သို့ စီမံခန့်ခွဲရမည်၊ မည်သို့ ဦးဆောင်ရမည်၊ ထို့အပြင် Leader တစ်ဦးတွင် ရှိရမည့် ကျင့်ဝတ်နှင့် အခြားသော အရည်အချင်းများကိုလည်း သင်ကြားပို့ချ သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
လုပ်ငန်း၊ ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းများကို ဦးဆောင်နေရသူများ၊ လုပ်ငန်းခွင်တွင်လိုအပ်သော ခေါင်းဆောင်မှု စွမ်းရည်များကို
UMG College Myanmar
🎓UMG College Myanmar (UCM)သည် ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်၍ အရည်အသွေးပြည့်ဝသည့် အင်ဂျင်နီယာ အတတ်ပညာရှင်များ
Victoria University Collage Myanmar
အခြေခံပညာအထက်တန်းစာမေးပွဲ အောင်မြင် ပြီးသူများ အတွက် - - အင်္ဂလန်အစိုးရပိုင် တက္ကသိုလ်မှ တိုက်ရိုက် ချီးမြှင့်သည့် BA/BSc/BEng(Hons) ဒီဂရီဘွဲ့ကို (၃နှစ်) အတွင်းမှာ ရရှိနိုင်မယ့် အခွင့်အရေး
Yangon Bakery & Pastry Training Center
Bread and Cake Class မှ သင်တန်းသား သင်တန်းသူ များရဲ့ လက်ရာလေးတွေပါရှင်။ သင်တန်းလာပြီးတက်ရောက်ကြတဲ့ သင်တန်းသား တဦးတယောက်ချင်းစီကို Yangon Bakery မှ အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။